Imbeeki (Gabay) : Falceliska Warqaddii Madaxweyne Thabo Mbeki
Maalmihii la soo dhaafay, waxaa warbaahinta Soomaalida lagu faafiyay, warqad uu qoray Madaxweynaha Koofur Afrika, MudaneThabo Mbeki. Warqaddaas oo markeedii hore lagu daabacay tirsigii 1aad ( 12 -18 Jannaayo 2007) ee wargeyska ANC Today , wuxuu madaxweynuhu aragtidiisa uga dhiibtay, xaaladda cakiran ee Soomaaliya iyo sidii xalkeeda loo gaari lahaa.
Mudane Mbeki, wuxuu qoraalkiisa ku faahfaahiyay, kaalintii hormuudnimo ee Soomaaliya ay ka soo qaadatay halgankii gobonnimoddoonka Afrika. Magaalada Muqdisho , ayuu Madaxweynuhu xusay, in bartamihii toddobaatanaadkii ay aheyd xaruntii rajada ee howlaha gobonnimoddoonka Afrika laga abaabuli jiray. Madaxweyne Mbeki, wuxuu gabagabadii warqaddiisa, waddamada Afrika ku baraarujiyay, in ay u midoobaan waxkaqabashada dhibaatada Soomaaliya.
Marka si guud loo qiimeeyo, waxtarka warqadda Madaxweynaha, xilligaan murugo ee Soomaaliya ay maanta ku sugantahay, wey sii fiicnaan laheyd in Madaxweyne Mbeki iyo dowladdiisa Koofur Afrika laga helo hiil iyo taageero dhaafsiisan ra’yi warqad ku qoran. Wey sii fiicnaan laheyd in uusan Madaxweynuhu ka gaabsan xaqiiqada na hortaalla iyo gumeysiga cusub ee lala damacsanyahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Laakiin haddana, Mudane Mbeki, niyadsamaanta, isxilqaanka iyo taageerada uu ku baaqay ee Afrika oo mideysani iney wax u qabato Soomaaliya, waa dadaal mudan in looga mahadceliyo, aadna loogu ammaano.
Sida uu Madaxweynuhu sheegay, bartamihii toddobaatanaadkii, xilligii ay Soomaaliya aheyd qaran awood leh, waxey garab hagarla’aan ah la barbartaagneyd waddamadii Afrika ee weli ku hoos jiray gacantii gumeysteyaasha. Waqtigaas baaqa Soomaalidu - carruur iyo cirroolaba - wuxuu ahaa “ Hobeey Afrikaay Huruddooy, cadow ku heeryee huruddooy, halyeeyadaadii huruddooy, haad baa cunaayee huruddooy !!
Ka dib 30 sano, waayahaa berisamaadka ee xusuusta madaxweyne Mbeki iyo in badan oo Soomaalida qarannimada jecel ahba ku weyn, nasiibdarro, Muqdisho waxey noqotay Muqdisho kale! Soomaaliya waxay isku bedeshay Soomaaliya kale! Afrika waxey u muuqataa Afrika kale! Adduunkiina waa Adduun kale oo la sii walaaqayo, hoggaankana ay u hayaan indhowgaradyo ujeeddoxumeyaal ahi !
Haddii shalay, Muqdisho loo yaqaannay Xiddigtii rajada Afrika, maanta! xaalkeedu sidaas waa ka duwanyahay. Haddii shalay, Soomaaliya ay aheyd hooyadii halganka gobonnimodoonka Afrika, hiil badan oo hagarla’aan ahna laga heli jiray, maanta! waa meel la hilmaamay, la hagraday, dab laga huriyay, kadibna si jeesjees ah loogu sheegayo meel aan loo hoyan oo halaqyogaleen ah!!
Sida uu sheegay Madaxweyne Mbeki, maanta Afrika waxaa la gudboon in iyadoo mideysan ay si daacadnimo ah ugu gurmato umadda Soomaaliyeed oo dhibaato lixaad lihi ay la soo deristay. Haddii aan sidaa la yeeleyn, oo aysan maanta Afrika waxba tari karin Soomaaliya, waxaa qumman in aysan yeelin, oo aysan noqon, xaabo lagu shito oo lagu karsado lafaha umadda tabaaleysan.
Ciidamo Afrikaan ah oo maanta qaabka la damacsanyahay loogu diro Soomaaliya, waxay la macno yihiin, ciidamo Afrikaan oo waddanka Koofur Afrika loo diray xilligii Midabtakoorka, si ay maamulkii dulmiga ku dhisnaa ee Pretoria uga kaalmeeyaan kahortagga iyo ciribtirka ururkii xaqudirirka ahaa ee ANC iyo garabkiisii gaashaandhigga ee Umkhonto we Sizwe ( Waranka Qaranka), oo waagaas in badan oo dowladaha ilbaxnimada sheegta ka mid ahi ay u yaqiinneen urur argagixo oo adduunyada khatar aad u weyn ku hayey.
Sida Muuqata, dhowr waddan oo Afrikaan ah ayey askartoodu hamuun u qabaan in Soomaaliya ay u shaqo doontaan. Waddamadaasi welwelka kaliya ee ay qabaan waa in meel la saaro kharashka ciidamadooda lagu kireysanayo iyo ciddii ay ugu hagaagi lahaayeen. Nasiibdarro, waddamadaasi ma fahamsana, sababta Soomaaliya seefaha loogu afeysanayo. Nasiibdarro, waddamadaasi ma fahamsana, in waxa maanta Soomaaliya lagu sameynayaa ay iyagana berri ku soo socoto, xaalkuna yahay: Ninkii qeyrkii loo xiirayow, aduna soo qoyso !!.
Gabagabadii, waxaa mar kale mahad badan mudan, Madaxweyne Thabo Mbeki, oo warqaddiisii qiimiha laheyd ay igu dhalisay inaan qalinka u qaato qoraalkaan dheer. Si gaar ah waxaan Madaxweynaha ugu dirayaa gabaygaan hoose oo aan ku magacaabay Mbeki, oo soo baxay 05/02/2007. Gabaygu wuxuu ka warramayaa, xaaladda dhabta ah ee ay maanta ummadda Soomaaliyeed ku sugantahay, wuxuuna dhambaal u dirayaa dhinacyo kala duwan oo ay arrinta Soomaalidu khuseyso. Waxaan rajeynayaa, in warqadda Mudane Mbeki, ay noqon doonto billoowga hiilkii umadda Soomaaliyeed ay in muddo ahba ka dhowreysay saaxiibadooda ay halganwadaagga yihiin ee reer Koofur Afrika.
Waa kan Gabaygii la magacbaxay Mbeki ee akhris wanaagsan:
Ikhyaarow amuurahaad qortiyo ereyadaad sheegtay
Idaacadaha lagu faafi iyo aalad dheereyne
Akhris kii yaqaan wuu arkoo faham ujeedkiiye
Kaan dhaguhu awdneyn u maqal addin sidiisiiye
Soomaali adduunyada dhammaan aag kastoy joogto
U riyaaqe oday iyo ilmaba oddoroskaagiiye
Ahbal qeyrkii u adeegayoo abbabba’leynaaya
Ogaallaawe ma ahidoo shacbigu waa ogsoonyahaye
Imbeekow i maqal Afrikadii wey ilduufsheene.
Imbegaati wixii lagu askumay IGAD shirqoolkeedii
Arab Moi arrinkuu gole ka yiri waa afkalaqaade
Aanada la garabsiinayee eexda lagu daabay
Dulmigey Itoobiya waddoo caalamku arkaayo
Inkastood ka gaabsatay Addis dabkey afuufeyso
Angooliyo markaan inta xaqiran garab istaageynay
ANC ( ee en sii) wixii aan tarniyo Umkhonto we Sizwe
Mar haddaad abaalkii xustiyo sidaan aheyn waayo
Istakoor haddaan legednay iyo arxan la’ aantiisii
Edeggii gumeysiga haddii ooddii laga feyday
Oo idinku kaad doorataan eeggan talinaayo
Intaasiba anfaco noogu filan oon ku ba’ayaaye
Ixtiraamka aadmiga marbuu eeygu dhaamaaye
Sida awr macsaro shiidayoo indhaha loo duubay
Ama dibi intaasoo hektaar fala aroortiiba
Oogada nin laga fuulayoo loo itaal sheegtay
Oo eheladii lagu dhex raro lana uleynaayo
Ikhtiyaar qof loo diidayoo ilmadu daadeyso
Oo sidii alaabtiyo dharkii suuqa lagu iibsho
Addoonnimo xanuunkeeda iyo eelkey reebeyso
Isticmaar aan nixin waad ogtahay urugadiisiiye
Awguul nasiibiyo ixsaan leysla soo doontay
Isii laguma helin gobonnimadaan ku istareexnaaye
Geesiyaa ifkaan laga qarshoo aakhirow kacaye
Waa tuu abaabulku dhacoo iil la doorbidaye
Waa tey madaafiic onkodi aastay xaafado’e
Waa tii awow loo diloo aabbo loo qalaye
Waa tuu dhulkii ololayoo eebo leys daraye
Ayrab geela waa tii la dhacoon ari la reebeyne
Waa taan agoon wada aheyn iyo asayleeye
Ilaah Qaadir weeyoo isagaa kownkan maamulaye
Isagaa abuuroo khalqiga qoray arsaaqdoode
Arjigaan direyniyo markuu yeelay aammiintii
Oo ducadii uu naga aqbalay Allaheen weynaaye
Wax la soo adkeystaba markaan tuugadii erinnay
Alalaasku goortuu dhacoon aakah niri maalmo
Goortaan dugsiyo aadnayoo alifkii noo toosay
Ayaxii aboorka ka darnaa miinaduu aasay
Ugxantii dillaacdaa mar kale uumiyii rogiye
Irbad suna rag lagu soo mudoo dhaqankii uuley leh
Afmiishaarro uurku dabanyahiyo eed qabaa yimide
Aaminnimo qof lagu tirinayoo anshax u sii raaco
Indheergarad inaad yahay la hubo aadanuhu sheegye
Ixtiraam annaga oo ku lari iyo asluub gaara
Ugaasow ergaan kaa rabnaa inaad ajiibtaaye
Intii berrito nala eersan laa waa afeef horaye
Mid adeerkaa odaygii ahaa maqal Abwaanow dheh
Mid Afrika amaah lama baryee aayahaa garo dheh
Mid kalana Iskaashiga dulmiga aayarsada hoy dheh.
Aarkii Mandeelliyo haddaad aqalladii gaarto
Ileyskii mugdiga nuuriyow ummaddii Soomaali
Ayaamahan musiibaa heshoy la ibtiloobeen dheh
Orobbiyo waxaa isugu tagay reer Ameerika dheh
Austareeliyana kama maqneyn uubateyntaas dheh
Aasiya afkey xiratayoo weyska eegtaa dheh
Carabihii ikhwaanow lahaa wey inkirayaan dheh
Ummadihii midoobana intaa way ajarayaan dheh
Axmaqiyo waxaa loo boqraa kaan waxba ogeyn dheh
Midka aynigaadaana waa laga idleeyaa dheh
Iyagoon itaal badan lahayn iskuxirkii beesha (Afrika)
Agaasimiddii xaqudirirka iyo hobey Afrikaadii
Waxa looga aargudanna waa ololahoodii dheh!
Amakaagga qaaradda ka jira waad ogsoontahaye
Abeesooyin maatada jaqiyo abris wax baabi’iya
Akhlaaqxumo dir lagu soo xuliyo aqli la’aantooda
Afku kuwuu u buuxaa xukuma oo la iibsadaye
Urur horusocdiyo waa u nacab kii aqoon lihiye
Mar haddey abaar iyo colaad iyagii liitaanba
Mar haddey abaalkaan mudneyn badi illoobeenba
Mar haddiiba la amraayo oo lagu adeeganayo
Ijaar yaa na siin iyo hadduu arradbax xaal joogo
Inkaar qabaha ubadkii dhashiyo umulihiis dooxay
Wuxuu maanta noogu soo ordaa waa asluub xumaye
Waa aaran lagu doogsadiyo yey iftiin heline
Waa fitno arooskeede iyo arbush waxow roone
Ammaandarrada waa dhiirrigeli joogna abidkaaye
Askartaa la sheegsheegayee lagu ugaarsanayo
Asaaggood kuwaa uu dirsado waan ehbineynaaye
Olol naara haddii aysan rabin edeb in loo yeelo
intaan ooryahoodiyo dhashii aaway ku barooran
Ashtakaan haddaba sii nahaye yey na soo aadin.
Anfariirnay saaxiib halkuu maray adduunkiiye
Idahaaba dhaamiyo dadkii orgidey foofshaane
Ilbaxnimada lagu faanayana waa i maqashiiye
Axdi meel u yaal iyo ma jiro waxey ilaalshaane
Marba waxa Ilaah sheegta kii ugu awood roone
Ibleyskaa u yeeriya markaa aragti shaydaane
Kii aan addeecinna hubkaa lagu asqeeyaaye
Argagixiso haddii loo yaqaan ruux Islaamoo dhan
Oogidda salaaddiyo haddii ajar la ceebeeyay
Ashahaadda annagaa qirnoo Eebbe caabbudiye
Haddaan eber baxeynana wallaan inkira yeeleyne
Adolf ( Hitler) sidiisii kuwaa kibirku aafeeyay
Ee dunida afarteeda gees weerar ku ekeeyay
Iimaan la’ aantaa hoddoo wey ambanayaane
Albaabkoodi waxey moodayaan irdo islaameede
Arligaad rabtaan dega ayay arrin ku goosteene
Imtixaan intii aysan mudan oon Alle ciqaabin
Haddey owgeyow talo rabaan waa insaan wuxuye
Isafgarasho nabad baa leh iyo aayatiin wacane
Ogeysii islaax inuu dan yahay ubax la sii beerto.